चेल्सीविरूद्ध लिभरपुलले निकाल्यो शानदार जीत — Imandarmedia.com
१गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय
२‘पोर्न, फिल्म काण्डमा अर्की अभिनेत्री मुछिइन्, राज कुन्द्रासँग थियो ५० प्रतिशतको डील
३त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ किलो १६५ ग्राम सुन बरामत
४आफ्नै श्रीमानले ज्वाला संग्रौलाको यस्तो पोल खोलिदिएपछि सबैको होस उड्यो
५गगन थापाको वलि लाई चेतावनि के भने तेस्तो ?
६राष्ट्रपति भण्डारी टिचिङ हस्पिटल भर्ना, के भइन बिरामी
७भीम रावलले माधव क्याम्प छाडेकै हुन् त ?
८ओलीलाई ठूलै झड्का दिनेगरी सातै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने देउवा सरकारको तयारी,गठबन्धनमा खुसीयाली
९इजरायलमा एक हजार नेपालीलाई मासिक २ लाख तलब दिने गरी खुल्यो जागिर, सूचनासहित
१०जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक आज बस्दै, ठाकुर पक्ष जान्छ की जादैन ?
११यस्तो गोप्य सूचना पाएपछि हतारिदैँ शितलनिवास छिरे ओली
१२लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा, अब के हुन्छ ?
चेल्सीविरूद्ध लिभरपुलले निकाल्यो शानदार जीत
काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लन्डन क्लब चेल्सीलाई पराजित गरेको छ । घरेलु मैदानमा लिभरपुलले चेल्सीमाथि शानदार जीत निकालेको छ ।
बुधबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले चेल्सीलाई ५–३ गोल अन्तरले हराएको छ । एनफिल्डमा लिभरपुलसँगको हारसँगै चेल्सीको शीर्ष चारको यात्रा कठिन बनेको छ । अब चेल्सीले शीर्ष चारमा स्थान बनाउनको लागि अन्तिम खेलमा वल्भ्सलाई पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो र पाँचौ स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटीबीचको खेलले पनि चेल्सीको शीर्ष चारको यात्रालाई तय गर्नेछ । लिभरपुलको जीतमा नावी केइटा, ट्रेन्ट एलेक्सन्डर अर्नोल्ड, जर्जिन्हो विज्नल्डम, रोवर्टो फिर्मिन्हो र एलेक्स अक्सलेड चेम्वरलेनले गोल गरे । चेल्सीका ओलिभर जिरुउड, टम्मी अब्राहम र क्रिस्टियन पुलिसिसले गोल गरे ।
लिभरपुलसँगको हारसँगै चेल्सी ६३ अंक जोडेर चौथो स्थानमा झरेको छ । समान ६३ अंक रहेपनि म्यानचेस्टर युनाइटेड गोल अन्तरमा तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । लिभरपुलको ९६ अंक पुगेको छ । च्याम्पियन बनेको लिभरपुलले यही खेलपछि नै प्रिमियर लिगको ट्रफी उचालेको छ।
यस्तै प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीका रहिम स्ट्रलिङको आक्रामक खेलको सिकार बनेको वाटफोर्ड रेलिगेसन क्षेत्रबाट उम्किन चुकेको छ । बुधबार बिहान भएको खेलमा सिटीसँग वार्टफोड आफ्नो घरेलु मैदानमा ४–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
सिटीसँग लज्जास्पदा हार ब्योहोरेको वार्टफोड लिगमा ३४ अंकसहित १७औं स्थानमा छ । लिगको शीर्ष दोस्रो स्थानमा रहेको सिटीको जीतका लागि स्ट्रलिङले दुई गोल गरे भने फिल फोडेन र एमेरिक लापोर्तेले समान एक–एक गोल गरे ।
खेलको पहिलो हाफमा २–० गोलको सहज अवस्थामा पुगेको सिटीका लागि स्ट्रलिङले ३६ र ४१ औं मिनेटमा गोल गर्दै टीमलाई दोहोरो अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफमा फोडेनले ६०औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई ३–० गोलको अग्रता दिलाएका थिए भने लार्पोतेले ६६औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
४–० गोलले पछि परेको वाटफोर्डका लागि गोल फर्काउने समय रहेपनि उसले अवसलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा फराकिलो हार ब्योहोर्न बाध्य भयो । ३७ खेल खेलेको सिटी ७८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
टोकियो ओलम्पिक ८ स्वर्णसहित जापान शीर्ष स्थानमा, चीन तेस्रोमा झर्यो
के मेस्सीले अर्जेन्टिनाको २८ वर्षे उपाधि खडेरी तोड्लान ?
किन घट्यो चासो कोपा अमेरिका फुटबलप्रति ?
युक्रेन युरोकपको क्वाटरफाइनलमा, स्वीडेन पराजित